RetargetLinks: Mampiseho doka amin'ny atiny zarainao | Martech Zone
Rehefa lasa fahefana an-tserasera ny marikao dia tsy antenaina ny hanoratanao sy hamoahana ny vaovao rehetra navoaka tao. Raha ny marina, tranonkala sy loharano maro no manana fahefana bebe kokoa noho ny marikao. Satria nanao asa mahafinaritra be ry zareo, ny fizarana ny lahatsoratr'izy ireo dia hanampy amin'ny fananganana ny fahatokisanao sy ny fahefanao an-tserasera.
Mazava ho azy, ny tena mahasoa kokoa dia ny fahaizanao mamily ny fifamoivoizana mankany amin'ny lahatsoratr'izy ireo ary avy eo manome antso an-tariby miverina hamerina ny tolotra omena anao. miaraka RetargetLinks, izany indrindra no azonao atao amin'ny doka amin'ny saina tsy miverina. RetargetLinks noforonina fampidirana rohy ary nanao patanty ny haitao misy azy ireo, ka izy ireo ihany no orinasa nanolotra an'ity serivisy ity.
RetargetLinks manolotra sehatra iray ao anaty iray ho an'ireo izay tia ny fahatsorana: aorian'ny famoronana ireo rohy fohy, ny mpampiasa dia afaka misintona sy mandatsaka ny doka fanaovany sora-baventy ary mitantana ny doka fampirantiana doka avy amin'ny vatan-tsoratry ny rafitra.
Raha efa manana pixel Facebook, LinkedIn na Twitter ianao, dia azonao ampiasaina maimaim-poana ihany koa ilay rafitra (tsy maintsy mihazakazaka eo an-tsisin'izy ireo ny doka). Avelany hampiasa maimaim-poana ny URL misy anao koa ianao.
Tena mahavariana tokoa izany, ahafahanao mizara rohy amin'ny alàlan'ny mailaka, sosialy, na koa amin'ny alàlan'ny Google Adwords, mankany amin'ny tranonkala iray izay manampy anao hitarika an-trano ny fampahalalana izay hampirisika ny mpamaky hikitika ny rohy. Tsy izany ihany fa azonao atao tsara ny manamboatra ny dokam-barotra amin'ny tena marina!
Ireo mpivarotra dia afaka mampiasa retargetLinks ho an'ny:
Famerenana votoaty - mitadiava lahatsoratra iray izay mahatratra ny mpihaino kendrenao, zarao io lahatsoratra io, ary apetraho amin'ny dokambarotra amin'ity lahatsoratra ity sy am-polony maro mandritra ny tapa-bolana.
Famerenana ny mailaka amin'ny mailaka - mizara lahatsoratra ao amin'ny mailakao amin'ireo tranokalan'ny antoko fahatelo, ary apetraho amin'io lahatsoratra io ireo dokam-barotra ary am-polony hafa mandritra ny tapa-bolana.
Famerenana indray ny haino aman-jery sosialy - mizara vaovao sy fampahalalana amin'ny fantsom-piarahamoninao, ary avy eo mitondra fiara hiverina aminao miaraka amin'ny dokam-barotra amin'ireo tranonkala ireo.
Fikarohana retarget - avereno jerena daholo ireo izay tsindrio ny Google Adwords misy doka amin'ny sora-baventy mandritra ny tapa-bolana aorian'ny tsindrio ny Google Adwords anao.
Navotsotr'izy ireo koa a Chrome Extension hahafahan'ny mpivarotra hanafohezana ny rohy mankany Hootsuite, Buffer, Facebook, Twitter sns fa tsy mila mankany RetargetLinks isaky ny mandeha.
RetargetLinks mampiseho doka amin'ny alàlan'ny fifanakalozana lehibe rehetra, ao anatin'izany ny Google, Rubicon Project, Pubmatic, OpenX, BrightRoll, Pulsepoint, millennialmedia, Aerserv, Adap.tv, LiveRail, mopub, ary AppNexus. Tsy ilaina ny fisoratana anarana, mandoa fotsiny ny doka ataonao amin'ny $ 8 CPM ($ 8 isaky ny doka 1,000).
Fohy ny rohinao voalohany hamoronana kaonty
Tags: Adap.tvfanoratana indrayfampidirana adwords indrayAerservappnexusBrightRollfamerenana votoatyfamerenana mailaka mailakafamerenana facebookgoogle retargetingGoogle +fampidirana an-tseraseraLiveRailmillennialmediamopubOpenXPubmaticPulsepointrohy retargetretargetingretargetlinksTetikasa Rubiconfitadiavana retargetingfamerenana indray ny haino aman-jery sosialyfamerenana amin'ny laoniny twitter
Inona no atao hoe mpizara doka? Ahoana ny fomba fiasan'ny doka?